A Moment to Remember (2004) | MM Movie Store
အခဈြစဈဆိုတာကို သိမွငျဖို့လှယျမယောငျနဲ့ခကျ တိမျမယောငျနဲ့နကျပါတယျ အခဈြကို အကွိုကျနဲ့ရောထှေးနတေဲ့ အရခွေုံအခဈြတှလေညျးရှိပါတယျ ဘာကွောငျ့ညာကွောငျ့ခဈြတယျဆိုတာတှကြှေနျတျောတို့အမြားကွီးကွားနရေတယျ အကွိုကျနဲ့ခဈြလိုကျပွီဆိုရငျ အတူယှဉျတှဲပါလာတာက မာနပါပဲ မာနတှနေဲ့ ဘောငျခတျပွီးမွငျနရေငျတော့အခဈြစဈမဟုတျပါဘူး
အခဈြစဈဆိုတာ ပေးဆပျမှုတှနေဲ့ကိုယျခဈြတဲ့သူ ကို စိတျခမျြးသာစပွေီး အမွငျ့ကိုရောကျသှား စဖေို့ပဲ ဆန်ဒရှိပါတယျ ဒီကိုရီးယားကားလေးထဲမှာ အခဈြစဈဆိုတာမြိုးတှေ တှမွေ့ငျရပါတယျ
ကောငျလေးက သာမနျလကျသမားဆရာလေးတဈယောကျ ငယျငယျလေးထဲက အဖဆေုံးသှားတဲ့အပွငျ အမကေ ဘယျအရပျဘယျဒသေရောကျနမှေနျးမသိ ကောငျမလေးကအစစအရာရာသူ့ထကျသာပါတယျ အဖကေ ဆောကျလုပျ ရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈသလို သငျ့တငျ့တဲ့ငှရေေးကွေးရေး အသိုငျးအဝနျးရှိပါတယျ
သူတို့၂ယောကျဟာ တဈနေ့ စတိုးဆိုငျလေးတဈဆိုငျမှာ ဆုံခဲ့ကွတယျ ဒီလိုနဲ့ပဲ………. တကယျတော့ ဒီဇတျကားလေးဟာ သာမနျကိုရီးယားအခဈြဇတျလမျးပါပဲ ဘဝကိုနာကဉျြးခကျြတှရှေိတဲ့ဂဈြကနျကနျကောငျလေးတဈယောကျဟာ အခဈြကွောငျ့ပွောငျးလဲလာပုံတှေ တှရေ့တယျ
မိဘတှတှေဟော ကိုယျ့သားသမီးကို အမွငျ့ဆုံးဖွဈစခေငျြပမေဲ့ နောကျဆုံးသားသမီး ဆန်ဒကိုဦးစားပေးတဲ့ မတ်ေတာတရား တှကေိုလညျးတှနေို့ငျတယျ ကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေးဟာ အခဈြအတှကျ ပေးဆပျပုံလေးတှကေိုလညျးတှမွေ့ငျရမှာပါ
အထူးသဖွငျ့ အပွဈကငျးကငျးနဲ့ ပှငျ့လငျးရိုးသားတဲ့စရိုကျပုံစံသရုပျဆောငျတဲ့ Ye-jin Sonက ခြီးကြူးဖို့ကောငျးပါတယျ နောကျခံတေး ဖြော့ဖြော့လေးတှနေဲ့ စီးမြောလို့ကောငျးတဲ့ ဇတျကားဆိုတာတော့ IMDb 8.2ဆိုတာကွညျ့ရုံနဲ့လုံလောကျပါတယျ ဟုတျကဲ့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြာ …..
အချစ်စစ်ဆိုတာကို သိမြင်ဖို့လွယ်မယောင်နဲ့ခက် တိမ်မယောင်နဲ့နက်ပါတယ် အချစ်ကို အကြိုက်နဲ့ရောထွေးနေတဲ့ အရေခြုံအချစ်တွေလည်းရှိပါတယ် ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားနေရတယ် အကြိုက်နဲ့ချစ်လိုက်ပြီဆိုရင် အတူယှဉ်တွဲပါလာတာက မာနပါပဲ မာနတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်ပြီးမြင်နေရင်တော့အချစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး
အချစ်စစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကို စိတ်ချမ်းသာစေပြီး အမြင့်ကိုရောက်သွား စေဖို့ပဲ ဆန္ဒရှိပါတယ် ဒီကိုရီးယားကားလေးထဲမှာ အချစ်စစ်ဆိုတာမျိုးတွေ တွေ့မြင်ရပါတယ်
ကောင်လေးက သာမန်လက်သမားဆရာလေးတစ်ယောက် ငယ်ငယ်လေးထဲက အဖေဆုံးသွားတဲ့အပြင် အမေက ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသရောက်နေမှန်းမသိ ကောင်မလေးကအစစအရာရာသူ့ထက်သာပါတယ် အဖေက ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို သင့်တင့်တဲ့ငွေရေးကြေးရေး အသိုင်းအဝန်းရှိပါတယ်
သူတို့၂ယောက်ဟာ တစ်နေ့ စတိုးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ ဆုံခဲ့ကြတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ………. တကယ်တော့ ဒီဇတ်ကားလေးဟာ သာမန်ကိုရီးယားအချစ်ဇတ်လမ်းပါပဲ ဘဝကိုနာကျဉ်းချက်တွေရှိတဲ့ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အချစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲလာပုံတွေ တွေ့ရတယ်
မိဘတွေတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးသားသမီး ဆန္ဒကိုဦးစားပေးတဲ့ မေတ္တာတရား တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာ အချစ်အတွက် ပေးဆပ်ပုံလေးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ
အထူးသဖြင့် အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့စရိုက်ပုံစံသရုပ်ဆောင်တဲ့ Ye-jin Sonက ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ် နောက်ခံတေး ဖျော့ဖျော့လေးတွေနဲ့ စီးမျောလို့ကောင်းတဲ့ ဇတ်ကားဆိုတာတော့ IMDb 8.2ဆိုတာကြည့်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ …..
Sherlock (Season 3,Episode 3) – His Last Vow